> Resource > Video > Sida loo Beddelaan Rhapsody in MP3
Rhapsody yaana music weyn online kuu ogolaanaya inaad si ay u soo baxdo iyo iibsato geeyo music iyo files audio. Dad badan waxay helaan in ay awoodin in ay iyaga soo dhoofsadaan in ciyaartoyda warbaahinta la qaadi karo sida iPod ama barnaamijyo kale music digital. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo taariikhqorihii audio xoog badan, aad si fudud u bedeli karaan Rhapsody in MP3 Raaxo meel kasta.
Raadinta taariikhqorihii maqal ah ee Google, ayaa la soo bandhigi doonaa in aad doorashooyin fara badan. Laakiin Badankood waa kuwa xun, qoraalana music Rhapsody khasaara ah oo tayo leh maqal ah. Halkan, waan ku sujuudayaa talinaynaa Streaming Audio Recorder .
Halkan tutorial Tani waxay ku tusaysaa sida ay u qoraan music Rhapsody iyo dhameysan MP3 Rhapsody qaab beddelidda isticmaalaya tallaabo software this talaabo.
Riix Link download in download this smart software. Markaas, labo gool guji faylka .exe si loo soo dajiyo Streaming Audio Recorder ah.
2 Bilow si ay u qoraan Rhapsody in MP3
Orod Rhapsody si MP3 Converter. Guji "Record" badhanka ee kooxda top-bidix ee ay shaashadda ugu weyn. Markaas, aad u ogaato ugana ciyaari song Rhapsody aad rabto si ay u qoraan.
Isla markiiba, taas oo taariikhqorihii audio smart ogaan doonaa audio ciyaareed iyo bilowdo si ay u qoraan music Rhapsody. Marka song ay ka badan tahay, la duubay ayaa sidoo kale ku dhameysatay. Ama waxaad ka dhacay karaa "Diiwaanka" badhanka mar kale si ay u joojiyaan duubay.
Fiiro gaar ah: In si loo badbaadiyo song Rhapsody ee ka mid MP3 file, waxaad u baahan tahay in la sameeyo hees Rhapsody sami ah u ciyaaro ka bilaabo si loo soo afjaro.
Wakhtigan, xaq-riix gabaygii Rhapsody duubay maktabadda this app iyo dooro "Open gal". Waxaad ka heli doontaa faylka Rhapsody MP3 audio horeba waa on your computer.
Sida lagu yaqaan in ay dhan, MP3 waa qaab Tifaftirayaasha audio, si ballaaran loo isticmaalo barnaamijyada computer iyo MP3 ciyaaryahan warbaahinta la qaadi karo sida iPod iwm Sidaas, waxaad ku raaxaysan karaan ama isticmaalin music Rhapsody aad deposal.